YEYINTNGE(CANADA): Thursday, December 29
၂၀၁၁ အပြောင်းအလဲများ၊ အငြင်းပွားစရာများ
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၁
ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာ အဓိကမေးဖြစ်တာကတော့ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်သို့ မကူးခင် ၂၀၁၁ နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ တိုးတက်မှုတွေဆီ ဦးတည်နေပြီလား၊ ဘယ်လိုမျိူး သဘောထားပါသလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာ …
ဖြေ။။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ မြင်နေရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တဖက်ကလည်း မပြောင်းလဲသေးတာတွေလည်း တွေ့ရှိနေရတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ အပြောင်းအလဲတွေကြားထဲမှာ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိနေသေးတဲ့ နှစ်လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။
မေး။။ ပထမအပြောင်းအလဲက ဘာလဲဆရာ။
ဖြေ။။ ပထမဆုံးကတော့ ၂၀၁၁ မတ်လမှာ ဦးသိန်းစိန်အစုိုးရ တက်လာတယ်။ သန့်ရှင်းသော အစိုးရဖြစ်ရေးဆိုတာတွေ ပြောလာတယ်။ သန့်ရှင်းသောအစုိုးရဖြစ်ရေးအတွက် မီဒီယာတွေကစတင်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ပြောလာတယ်။
မေး။။ အဲသည်မှာ သမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်ကို လှန်လိုက်ပြီလို့အထိ ပြောလာကြတယ်။ အဲသည်သမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်ကနေပြီး အစကပြန်စကြရမယ်လို့လည်း ပြောလာကြတယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ။။ ဒါက ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ သိန်းဖေမြင့်ရေးခဲ့တဲ့ ချင်းဝိသေသတိုင်းရဲ့ သမိုင်းအစဆိုတဲ့ စာအုပ်လိုပဲ၊ အစုိုးရတခု စနစ်တခု အစပျိုးတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့သဘောပဲ။ အရင်တုန်းက သမိုင်းမရှိဘူးလား ဆိုတာကို သူက မပြောဘူး။ မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အချိန်ဟာ သမိုင်းရဲ့ အစပဲလို့ ပြောတဲ့ သဘောပဲ။ ဒါမျိူး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀စုနှစ်လောက်တုန်းကလည်း သမိုင်းပညာရှင် ဖူကုယာမားက သမိုင်းနိဂုံးချုပ်ပြီလုိ့ ပြောတာမျိုးတွေ ရှိဘူးတာပဲ။ သမိုင်းဆုံးပြီ ဆိုတာ၊ သမုိုင်းအသစ်စပြီ ဆိုတာမျိူးတွေ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီတွေ ၀ါဒတွေ ပြီးဆုံးပြီဆိုတာမျိုးကို ဆိုချင်တာဖြစ်တယ်။ အခု သမိုင်းအသစ်စပြီဆိုတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီး စပြီလို့ ဆိုတာနဲ့ ဟိုမကြာသေးမီအတိတ်က စစ်အာဏာရှင်ခေတ် အဖြစ်တွေ၊ သမိုင်းတွေကို မေ့ဖျောက်ပစ်ရတော့မှာလား၊ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ အခုသမ္မတကြီးက ကောင်းမွန်သော အစုိုးရအဖြစ်ကို စတင်ပြီလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ပဲ ယခင်တုန်းက မကောင်းမွန်သော အစုိုးရရှိခဲ့တာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို နိဂုံးချုပ်ရတော့မှာလား၊ မေ့ပျောက်ပစ်ရတော့မှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမွန်သောအစုိုးရတွေ လုပ်ခဲ့တာတွေကို သင်ပုန်းချေရတော့မှာလားဆိုတဲ့ အမေးတွေ ပေါ်လာတယ်။ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိလာတယ်။
မေး။။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိ၂၀၁၁ နှစ်ကာလတခုအတွင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်သလဲဆိုတာပဲ ကြည့်ပြီး ပြောင်းလဲတာလား၊ တိုးတက်မှုတွေလား၊ အငြင်းပွားစရာတွေလားကိုပဲ ကြည့်ကြမယ် ဆိုရင်ကော ဆရာရယ်။
ဖြေ။။ တခုကတော့ အောက်တိုဘာလမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို လွှတ်ပေးတာ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ လုံလောက်ပြည့်စုံခြင်း မရှိဘူးလို့ ပြောရမယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အများကြီး ကျန်ရစ်နေသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိလာတယ်။ နိုင်ငံတကာက ပြောဆိုနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေအတွက်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တို့ ပြောတဲ့ အရေအတွက် ကွာဟမှုတွေ ပေါ်လာတယ်။ အားလုံးက အကျဉ်းသား ၂ ထောင်လို့ ပြောနေချိန်မှာ ၄၊ ၅ ရာပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောလာတာဟာလည်း အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာတယ်။
မေး။။ အရင်တုန်းက မရှိဖူးတဲ့ လွှတ်တော်တွေပေါ်ထွက်လာပြန်တယ် မဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။။ အဲသည်မှာလည်းပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြည်သူလူထုကောင်းကျိုး ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဖော်ဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အလုပ်တွေ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောဆိုသံတွေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သူတို့တွေက ပြည်သူတွေ အကျိုးရှိစေတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်မှုတွေ တကယ်လုပ်ကိုင် ဖော်ဆောင်ခြင်း ရှိမရှိကလည်း အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အလုပ်သမားအရေးတွေ တောင်သူလယ်သမားအရေးတွေ အတွက် ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ သမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ဆန္ဒပြခွင့်၊ ဒေသအလိုက် အုပ်ချုပ်မှုတွေ စတာတွေ ပေါ်ထွက်လာတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လုံလောက်သလား၊ အာမခံချက် ရှိသလား၊ လွတ်လပ်မှု၊ မျှတမှုတွေ ရှိသလားဆိုတာတွေက မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေတယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတို့၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ငွေကြေး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာတွေမှာလည်း ထင်ထင်ရှားရှား သဘောထား ချမှတ်တာ၊ ထုတ်ပြန်တာတွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိနေတယ်။
မေး။။ သို့သော် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ သမ္မတကြီးရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို လွှတ်တော်က တခဲနက် လက်ခံပေးခဲ့တာဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အများဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးတာ၊ ဖော်ဆောင်ပေးတာလို့ ပြောနိုင်တယ် မဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။။ ဒီအလုပ်ကတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်မပြုဘူးလို့ ပြောဆိုမှုတွေ၊ ထောက်ခံမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကို အမှတ်ပေးရမယ်လို့ ပြောနိုင်သော်လည်း ရေရှည်မှာ ဘယ်လောက် တည့်မတ်နေမလဲ၊ မှန်ကန်မလဲဆိုတာတွေကလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေမှာ ရှိနေတုန်းပဲ။
မေး။။ လက်ရှိ်အစုိုးရနဲ့ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်က ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အာရုံစူးစိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်လာတာတွေကော မရှိဘူးလား ဆရာ။
ဖြေ။။ နယ်စပ်ဒေသအနှံ့အပြားက လက်နက်ကိုင် တုိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အလိုက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေဆုံဆွေးနွေးတာတွေ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘာတွေက အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာကတည်းက သဘောထားတင်းမာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ ယခုလည်း ၀န်ကြီးတွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်နေတဲ့ လူကြီးတွေ ပေါ်ထွက်လာပြန်တယ်။ ဦးအောင်သောင်းတို့၊ ရထားဝန်ကြီးတို့တွေက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာတာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲသည်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့က ချက်ခြင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး၊ ကာလအားဖြင့် ၃ နှစ် လောက် အချိန်ယူရမယ်လို့ အစုိုးရပြောလိုက်တာကလည်း အငြင်းပွားစရာ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာတယ်။
မေး။။ တုိုင်းရင်းသားတွေက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပုံသဏ္ဍန်ကို ဘယ်လိုမျိုး ဖြေရှင်းတာမျိုး ရှိနေတယ်လို့ ထင်သလဲ။
ဖြေ။။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့ပြည်နယ်အလိုက် တဦးချင်း တဖွဲ့ချင်း ဆွေးနွေးကြတာတွေကို လက်ခံသလိုပဲ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အတူတကွ ဆွေးနွေးကြဖို့ကို သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်း ယခင်တုန်းကလို တဖွဲ့ချင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုပဲ အဓိကထား သီးခြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာမျိုးကနေ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်ထောင်စုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအထိကို တုိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးက အတူတကွ ရပ်တည် တောင်းဆိုလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုပဲ ဆွေးနွေးရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆွေးနွေးရမှာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရမှာတင် မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်ထောင်စုကြီးတခုလုံးအတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရမှာလို့ ပြောဆိုလာကြတာတွေ တွေ့လာရတယ်။ ဒါတွေကို ပြည်သူတွေက အကောင်းမြင်ပြီး မျှော်လင့်ကြသော်လည်း အစုိုးရဖက်က အချိန်အကန့်အသတ်တွေ သတ်မှတ်ပြီး တုန့်ပြန်တာကလည်း အငြင်းပွားစရာ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာတယ် လုို့ ပြောချင်တယ်။ အစုိုးရဖက်က ၃ နှစ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား၊ တုိုင်းရင်းသားတွေက အမြန်ဆုံး အကောင်းဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေမှုကို ပယ်ချလိုက်တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ အငြင်းပွားစရာတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
မေး။။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ကိုင်စွဲပြီးတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်တဲ့၊ ပြီးတော့ တဆက်တည်းမှာပဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီက ၂၀၁၁ မှာ ပြန်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်မယ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်ြ့ပီး အရွေးခံမယ်အထိ ဖြစ်ပေါ်လာတာကလည်း အပြောင်းအလဲတခုပဲပေါ့ မဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။။ လက်ရှိအစုိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ပြည်သူတွေကိုလည်း တိုက်ရိုက် သတင်းစာရှင်းလင်း အသိပေးမှုတွေ ဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ အဲသည်ကနေပြီးတော့ အစုိုးရဖက်ကလည်း အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးလာတယ်။ အဲသည်အတွက် အင်န်အယ်ဒီပါတီက ဗဟိုကော်မီတီအစည်းအဝေးနဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ အရေးပါတဲ့ အပြောင်းအလဲလို့ ပြောရင်ရပါတယ်။
မေး။။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်မှုတွေ၊ ဖျော်ဖြေရေး အနုပညာလုပ်ငန်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေါ်ထွန်းလာတာတွေကလည်း အပြောင်းအလဲတွေ မဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။။ စာနယ်ဇင်းလောကမှာ စာနယ်ဇင်းတွေ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေခွင့်တွေ ရလာတယ်။ စာပေစိစစ်ရေး ဦးဆောင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း စာပေစိစစ်ရေးမလုိုတော့ပါဘူးလို့ ပြောလာတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ် လူထုကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒေါ်စုတို့ ဗို်လ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ပုံတွေ စာတွေ ကို ဖတ်ရလို့ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ စောင်ရေတွေ တုိုးလာတယ်။ ဒါတွေကို အပြောင်းအလဲအဖြစ် မြင်ရမှာ ဖြစ်သလို ဘယ်လောက်အထိ အာမခံချက်ရှိမှာလဲ၊ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရနေဦးမှာလည်း ဆိုတာကလည်း အငြင်းပွားစရာတွေ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်တယ်။
မေး။။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးဟာ ခုချိန်အထိ အငြင်းပွားစရာ မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ မဟုတ်လားဆရာ။
ဖြေ။။ ခုချိန်ထိ အတုိုက်အခံတွေဖက်က ပြောဆို တင်ပြနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ဦးရေနဲ့ အစုိုးရဖက်က ဦးရေကို အငြင်းပွားနေရတုန်းပဲ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလုို့ အဓိပ္ဗါယ်သတ်မှတ်မှုကိုက သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် သဘောထားထုတ်ဖော်တာနဲ့တင် အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်နေသေးတယ်။
မေး။။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် မဟုတ်လား ဆရာ။
ဖြေ။။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ မကပါဘူး၊ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်းမှာ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာ သူတို့ဆီက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိလာတယ်။ အစုိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် အတုိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်တွေ့ရတယ်။ အားရကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိလာတယ်။ ၂၀၁၄မှာ မြန်မာပြည်က အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဖို့ ရွေးချယ်ခြင်းခံရတယ်။ အဲသည်အချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အလားအလာတွေရှိလာတယ်။ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ ခရီးသွားအလုပ်တွေ၊ လုပ်ငန်းအသီးသီးတွေမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား၊ ဘယ်လို လက်ခံနိုင်မလဲ။ စတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ပြောဆိုမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာလည်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မေးခွန်းတွေ၊ စဉ်းစားစရာတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အများက စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်အစုိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာပြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြေလည်ချင်တယ်၊ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံတကာနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်သွားမလဲဆိုတာကို လမ်းစတွေ ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတာတွေ မေးခွန်းဖြစ်လာတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်အုပ်စုချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အိုင်အမ်အက်ဖ်တို့ ကမ္ဘာဘဏ်ကိစ္စတွေ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ့်၊ စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး။။ အပြောင်းအလဲတွေကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ တုိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲဖက်ကို ဦးတည်တာကော ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အငြင်းပွားမှုတွေကို ဆရာက ဘယ်လို ဖြေမှာလဲ။
ဖြေ။။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေဟာ ဘယ်ကို ဦးတည်သလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်၊ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲသည်မှာ အချက် ၂ ချက် ပေါ်လာတယ်။ တချက်က ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုဖက်က၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက်က ပြောလာတဲ့ အချက်တချက်ဖြစ်တယ်။ သူကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ အခု မှတ်ပုံတင်တယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ရတာဟာ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံပြီး စွန့်စားမှုတွေ အများကြီး လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ ယုံကြည်မှုဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ စွန့်စားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ အစုိုးရဖက်အပုိုင်းက ပေါ်ထွက်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပေါ်ပေါ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော၊ လက်မခံနိုင်သေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိနေသေးတယ်။ သူတို့တွေက ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အသာထား၊ အရိပ်အယောင်တောင် မမြင်ရသေးဘူး။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဘယ်လောက်ပြောပြော၊ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာ အာဏာရှင် စရိုက်လက္ခဏာတွေဟာ အရင်တုန်းကအတုိုင်းရှိသေးတယ်။ ကျင့်သုံး ဖိနှိပ်နေတုန်းပဲ ဖြစ်တယ်။
မေး။။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ ဆရာ။
ဖြေ။။ ပြည်သူတွေဆိုတဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်သော အလွှာတွေမှာ လယ်တွေ အသိမ်းခံထားရတယ်။ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ဖြစ်နေတုန်း၊ ပိတ်ဆို့မှုတွေက အဆင့်ဆင့် ခံနေရတုန်း ဖြစ်တယ်။ အင်န်အယ်ဒီကိုယ်တိုင်က ရန်ပုံငွေပွဲလုပ်တာတောင်မှ ဟိုဒင်းနေရာမရ ဟိုရွှေ့ ဒီပြောင်း အလုပ်ခံနေရတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရှိနေတုန်းပဲ။ လာမယ့် မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနားရှိတယ်။ စာပေဗိမာန်မှာ လုပ်မယ်။ ကျနော့်ကို စကားပြောဖို့ ဖိတ်ထားတာ နေပြည်တော်ကနေ လှမ်းပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နေတယ်၊ စာပေဗိမာန်ဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ခွင့်မပြုဘူးလို့ ပြောကြတယ်။
မေး။။ တချို့တွေမှာ ဒီမုိုကရေစီ ရချင်ရမယ်၊ ဦးဝင်းတင်နားမှာတော့ ဒီမုိုကရေစီအရိပ်အယောင် မရှိသေးဘူးပေါ့။
ဖြေ။။ ကျနော့်အိမ်နားမှာ စောင့်ကြည့်နေတယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လုံခြုံရေးတွေက နေ့တိုင်း ရှိနေတုန်းပဲ။ အဲလိုဟာမျိူးတွေကို လူတွေက ပြောတဲ့အခါကျတော့ အောက်ခြေမှာ ဘာမှ အပြောင်းအလဲမရှိဘူးလို့ ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ အစုိုးရဖက်က ဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ သူတုို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဆိုတာ အပေါ်ဆုံးကနေ အောက်ဆုံးဆီကို စီးဆင်းရမယ့် top down အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အပေါ်မှာပဲ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေသေးတဲ့အတွက် အောက်ခြေကို မဆင်းသက်သေးတဲ့အတွက် လူတွေဟာ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေကို မခံစားရခြင်း၊ မသုံးသပ်နိုင်ခြင်း၊ မတွေ့မြင်ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ ဒါကိုလည်း အစုိုးရဘက်က ဘယ်တော့မှ အောက်ခြေဆီ ရောက်မှာလဲ ဆိုတာ မပြောနိုင်သေးဘူး၊ မေးခွန်းမေးစရာ၊ အငြင်းပွားစရာအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေသေးတယ်။
မေး။။ တဦးချင်း ဒီမိုကရေစီကနေ အများစုဒီမုိုကရေစီဆီသို့ ရရှိအောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရမှာပေါ့ဆရာ။ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အာဏာရှင်အဆင့်ဆင့်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပဲလို့ ပြောရမှာပေါ့ ဆရာ။
ဖြေ။။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အရကြည့်မယ်ဆိုရင် ရွှေည၀ါဆရာတော်နဲ့ အခြားဆရာတော်တချို့ကို တရားဟောခွင့်ပိတ်ထားတာတွေ ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်တွင်းစစ်တွေ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပွားနေတာတွေကို ကြည့်ရင်လည်း တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေ၊ နယ်စပ်ဒေသတွေဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ ကျော် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေဟာ မြို့ပြဒေသတွေကို ရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့ အနေနဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါတွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်နေရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။။ ဒီလို မေးခွန်းတွေ၊ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့က ဘာတွေ ဆက်လုပ်နေမှ ပြေလည်နိုင်မှာလဲ ဆရာ။
ဖြေ။။ ကျနော်တို့တတွေက နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရမယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးဆိုတာက အခုအချိန်ကတည်း ရှိနေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်သွားဖို့ကို ဆိုလိုတယ်။ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ လွှတ်တော်ထဲ သွားတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ သဘောထားတွေ၊ အသံတွေကို ၀င်ရောက် ဖော်ထုတ်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
ဥပမာတခုက ယခင်တုန်းက ရွှေဂုံတုိုင်သဘောထားဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာကို လွှတ်တော်ပြင်ပကနေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့အပြင် လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ရောက်ပြီး ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကို တိုးချဲု့ပြီး လုပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒေါ်စုက ပြောခဲ့တာ တချက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို တကယ်တမ်းပြင်ဆင်ပေးရမှာက လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ပေးမှသာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူများပြင်ပေးတာကို စောင့်နေ၊ တောင်းနေတာထက် ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ၀င်ပြင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ထဲသွားရင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ ပါတီက ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က အများပြည်သူ သိရှိနားလည်စေရေး ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။
မေး။။ ဆရာပြောတဲ့ လွှတ်တော်တွင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေက ဘာတွေဖြစ်မယ် ထင်သလဲ။
ဖြေ။။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောသွားတာရှိပါတယ်။ ကျမတို့ လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ရောက်ပြီး လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေက အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ေ၇းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကျနော်တုို့ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာတောက်လျောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ၃ ရပ်ကို လွှတ်တော်တွင်းမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးက ဖော်ဆောင်လာရေး ဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ၁ က ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ ၂ က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်ထောင်စုအရေးလို့ ပြောချင်လည်း ရတယ်။ ၃ က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုလည်း လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဖော်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ် ချပြ ထုတ်ဖော်ဖို့ လုိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး။။ ဒါဆိုရင် လွှတ်တော်ပြင်ပက နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လွှတ်တော်တွင်း ရောက်ရှိအောင် ဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ လက်ရှိ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီတို့နဲ့ လက်ရှိအစုိုးရတို့ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး၊ တုိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ပါ အဖြေရှာရေးတွေကလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရမယ့် အရေးတွေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပေါ့။
ဖြေ။။ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာရေးတွေ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ အဲသည်မှာလည်း မေးခွန်းတွေ၊ စဉ်းစားစရာတွေ ဆက်လက်ပြီး တည်ရှိနေမှာပဲလို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။။ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်တွေက ဘယ်လိုမျိုး ဆက်လက်ပြီး ၀န်းရံခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်း၊ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆရာ။
ဖြေ။။ ကျနော်ကတော့ လူထုရဲ့အသံနဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တုိုးချဲ့ရမယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ အမေရိကန်အစုိုးရက မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလင်းရောင်ခြည် မြင်ရပြီလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော၊ အခုဟာက ပြည်သူလူထု အားလုံးက မှောင်ထဲမှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ဂူပေါက်ဝကလို့ပဲပြောပြော၊ ထွက်ပေါက်လို့ပဲ ပြောပြော အလင်းရောင်အစ၊ကို လှမ်းမြင်ကြရတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ ဒါက အချိန်မရွေး နောက်ပြန်လှည့်ပြီး အမှောင်ကျသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်လို့ သဘောထားပြီးတော့ ပြည်သူလူထုက သူတို့တတွေဟာ အမှောင်ထဲမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်။ လူထုဟာ အမှောင်ထုကနေ ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကို ဆက်လက်ပြီး ထုတ်ဖော် ပြောဆို တင်ပြနေကြရမယ် လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ အားလျော့သွားတာ၊ အားနည်းသွားတာတွေ ဖြစ်ပေါ်လို့ မရဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ ငါတို့က အမှောင်ထဲမှာပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ဖော်နေရမယ်။
မေး။။ ဟုတ်ပါပြီ။ နောင် အသစ်ထူထောင်မယ့် အင်န်အယ်ဒီရဲ့ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုလည်း ပြောနိုင်ရင် ပြောပါဦးဆရာ။
ဖြေ။။ လူကြီးတွေက ကျနော်အပါအ၀င် သဘာပတိအဖွဲ့လိုမျိုး၊ နာယကအဖွဲ့လိုမျိုးမှာ ပါဝင်ကြမယ်။ သဘာပတိအဖွဲ့က အစည်းအဝေးတွေ၊ ဗဟိုကော်မီတီအစည်းအဝေးတွေမှာ တက်ရောက်မယ်၊ အကြံဥာဏ်ပေးမယ်။ မဲပေးတာမျိုးတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒါပြီးတော့ ပါတီမှာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ ဆိုပြီး ထားရှိမယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုတာကလည်း ဟန်ပြမဟုတ်ဘဲ တကယ်ကို ပါတီကို ဦးဆောင်မှုပေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို တာဝန်ပေးတာမျိုးဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဆိုတာကလည်း ပါတီရဲ့ အဓိက ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ဥပမာ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ စည်းရုံးရေးအဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ အစရှိသဖြင့် အဲသည်အဖွဲ့တွေကို တာဝန်ခံတဲ့ သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွေ ဖြစ်လာမယ်၊ အတွင်းရေးမှူးတယောက်ချင်းဆီဟာ သူကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ရတဲ့ အလုပ်အဖွဲ့တွေ ရှိလာမယ်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆိုတာမျိူး မထားတော့ဘူး။ အဲဒါဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အရင်တုန်းကလုို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်မှုပေးလာမယ်။
မေး။။ အရင်တုန်းကလို ဥက္ကဋ္ဌတွေ ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေ တင်မြှောက်ထားပြီး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့ စီအီးစီအဖွဲ့ဝင်တွေလိုမျိုး ဖွဲစည်းပုံကနေ၊ သဘာပတိအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဆိုပြီး ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဆရာ။ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မီတီဝင်တွေက ပါဝင်ကြမှာပေါ့။
မေး။။ ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်လာဦးမှာလား ဆရာ။
ဖြေ။။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့ကြားထဲက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဆက်လက်လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စကလည်း လာမယ့်နှစ်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ၊ အငြင်းပွားစရာအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေမယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/29/20110အကြံပြုခြင်း
လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကျဉ်းသားဘဝမှန် မတွေ့ခဲ့
အင်းစိန်ထောင်ကိုသွားပြီး လေ့လာခဲ့ရာမှာ ထောင်တွင်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု မတွေ့ရသလို အကျဉ်းသားတွေဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစစ်မြိုင်က အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အကျဉ်းထောင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့ အထူးဧည့်သည်တွေ လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေက အကျဉ်းထောင် ဆေးသုတ်တာ၊ အကျဉ်းသားတွေကို အခန်းထဲပိတ်ထားတာမျိုးတွေ အမြဲဆောင်ရွက်လေ့ရှိတဲ့အတွက် အဖြစ်မှန်ကို အထူးဧည့်သည်တွေ မသိနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုတွေ့ခဲ့ရတာလို့ ပြန်လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့ အကျဉ်းသားမိသားစုတွေက ပြောပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေထဲကို ပြည်တွင်း ပြည်ပအရာရှိတွေ ဝင်ရောက်လေ့လာစစ်ဆေးတဲ့အခါ ထောင်တွင်းမှာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားလေ့ရှိတာတွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ကြုံတွေ့ရတာတွေကို အာရ်အက်ဖ်အေ ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အကျဉ်းကျနေသူ မိသားစုတွေကို အားပေး
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ဝင်တွေက အကျဉ်းကျနေသူ ၈၈ကျောင်းသားတွေရဲ့ အိမ်တွေကို ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက သွားရောက်ပြီး မိသားစုဝင်တွေကို အားပေးစကား ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
သွားရောက်သူ အဖွဲ့ဝင် အများစုဟာ မကြာသေးခင်က အကျဉ်းထောင်က ပြန်လွတ်လာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး၊ စုစုပေါင်း လူ ၅၀ လောက် ပါဝင်တယ်လို့ အဖွဲ့မှာ ပါဝင်သူ ကိုကိုကြီး (စမ်းချောင်း) က ပြောပါတယ်။
သွားရောက်တဲ့ အဖွဲ့မှာ ပါဝင်သူ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ မိဘတွေဟာ အသက်အရွယ် အလွန်ကြီးရင့်နေပြီး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ သားဖြစ်သူ ထောင်တွင်းက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာအောင် အားမာန် အပြည့်နဲ့ စောင့်မျှော်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ အလားတူ ကျန်အကျဉ်းသားများရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကလည်း ယုံကြည်ချက် အားမာန်တွေနဲ့ စောင့်နေကြကြောင်း မစုစုနွေးက အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပြပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၈ ဦးရဲ့ နေအိမ်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး မနက်ဖြန် ဒီဇင်္ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာလည်း သွားရောက်ဖို့ ကျန်ရှိတဲ့ အကျဉ်းကျ ၈၈ကျောင်းသားတွေရဲ့ နေအိမ်တွေကို သွားရောက်မယ်လို့ ကိုကိုကြီး(စမ်းချောင်း) က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ရပ်ကွက် မီးဘေးဒဏ်ခံရသူတွေကို သွားရောက်အားပေး စကားပြောပြီး လူနာတဦးကို ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ မစုစုနွေးက ပြောပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမြင်
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါ နဲ့ မနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါ နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်။
အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးအပေါ် ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲလို့ အာရ်အက်ဖ်အေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလို ပြောဆို ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ မာတီဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို တကယ်ပဲ အားပေးချုင်တာ ထင်ရှားပါတယ်။ အာဆီယံမှာ ဒီလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာ တွေ့ရတာ သိပ် သဘောကျတာပဲ” အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးက ဘာတွေပြောဆိုခဲ့ပါသလဲလို့ အာရ်အက်ဖ်အေက ဆက်လက် မေးမြန်း ခဲ့ရာမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုတာတို့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ လိုတာတို့၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ တရားမျှမျှတတ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့လိုတာစသဖြင့် ပြောသွားတာ ရှိပါတယ်” မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖုိ့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ မာတီ နာတလီဂါဝါဟာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိခဲ့စဉ်မှာ မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေကို လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း လည်းသိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံအပြီး ဆီဒိုနားဟိုတယ်မှာ သတင်းစာရှင်းပွဲပြုလုပ်ရာမှာတော့ လာမယ့် လေးနှစ်အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကျော်ဖိုး ကုန်သွယ်မှာဖြစ်သလို အခုလာမယ့် ၂၀၁၂ ခုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက သစ်တော၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံဖြိုးဖို့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ စီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်း အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မန္တလေးမြို့က ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ခြံမြေ သိမ်းမှု
ဒီဇင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့မနက် (၈)နာရီခွဲခန့်က မန္တလေးမြို့ရှိ ၂၇ လမ်း ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃ လမ်းကြား
ဦးစူးစီးအပါအဝင် လူ(၈)ဦးတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားတွေက ၁၉၃၄ခုနှစ်ကတည်းက ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်
အိမ်ခြံမြေကို ကန်ထရိုက်နဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ ပူးပေါင်းကာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမပြနိုင်ပဲ
ဲ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အိမ်ရှိ ပစ္စည်းတွေကို ဆွဲချကာ အိမ်ခြံမြေကို သိမ်းယူမှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်
အကြီးမားဆုံးမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မီးသက်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးတင့်ဌေးရွှေက ပြောဆို
BurmaVJMedia on Dec 29, 2011
ဒီကနေ့မနက် ၂ နာရီလောက်က ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု ဟာ အကြီးမားဆုံးမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မီးသက်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးတင့်ဌေးရွှေက ပြောဆိုလိုက်သလို ယမ်းစိမ်းကြောင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူတွေအများအပြားသေကြေ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြော....
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်က မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပုသိမ်ညွန့် ရာကျော်ကျောင်းကြီး မဟာဝိဇယာရာမတိုက်နဲ့ အမက ၂၀၊ ၂၄ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည် ၂၀၀ ကနေ ၃၀၀ ကြား ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တွေက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အကူအညီတွေနဲ့ အစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်တွေအတွက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက လာရောက် လှူဒါန်းသလို တဦးချင်း လှူဒါန်းသူတွေလဲ အများအပြား ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတုပစ္စည်းအန္တရာယ် သတိမမူမိ၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကျဆုံးရ
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၉ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၌ လူ ၂၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့သော
နိုင်ငံပိုင် ဓါတုပစ္စည်း သိုလှောင်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွင် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ဓါတု ပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်ကို သတိမမူမိသဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ကျဆုံးခဲ့ရသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကပြောသည်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ လောင်ကျွမ်းမှု အရှိန်မြင့်နေသည့်မီးကို အမြန်ငြိမ်းစေလိုဇောဖြင့် ငြှိမ်းသတ်နေကြစဉ် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ မီးကူးလောင်နေသည့် ဓါတုပစ္စည်းများမှ ပေါက်ကွဲကာ အရပ်သား ၁၇ ဦးနှင့်အတူ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါ သေဆုံးခဲ့ရဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟိုမီးသတ်ဌာန အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မီးလောင်တယ်ဆိုတော့ဗျာ အခြားဘက်တွေကို မကူးအောင်ဆိုပြီး မီးကိုပဲ အဓိကထားပြီး ငြိမ်းသတ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဒီဓါတုပစ္စည်းတွေက ထပေါက်ကွဲတော့ အဲဒီမှာ ထိကုန်တာ။ ဒါတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျုပ်တို့က မသိဘူး။ ဂိုဒေါင်စောင့်တွေကတော့ တချို့က ပစ္စည်းသယ်နေတုန်းမှာ ထိကုန်တာ” ဟု ပြောသည်။
ဓါတု ပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်ကို သတိမမူမိသဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးကျဆုံး (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
သေဆုံးသွားသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များမှာ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မီးသတ်ဌာနမှ ၄ ဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟိုမီးသတ် ဌာနချုပ်မှ ၁ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီး ကြာသာပတေးနေ့ ညနေပိုင်းတွင်ပင် ရေဝေး သုဿန်၌ အခမ်းအနားဖြင့် မီးသဂြုင်္ိဟ်ပေးခဲ့သည်။
ကြာသာပတေးနေ့ ညနေ ၅ နာရီအထိ နောက်ဆုံး စုံစမ်းသိရှိမှုအရ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသည့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ ၃၁ ဦး၊ အရန်မီးသတ် ၆ ဦးနှင့် အရပ်သား ၅၄ ဦး ပါဝင်သည့် စုစုပေါင်း ၉၁ ဦးကိုလည်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့
ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူ နေရကြောင်း သိရသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်ရန် ရောက်ရှိလာ သည့် မီးသတ်ကား ၅၇ စီးအနက်မှ ၈ စီးမှာလည်း ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသော ဂိုဒေါင် ၁၆ လုံး ပျက်စီး ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ ဂိုဒေါင်တခုတွင် သင်္ဘောဆေးနှင့် အမိုးနီးယား၊ ဆာလ်ဖြူရစ်အက်ဆစ်နှင့် ယမ်းစိမ်းတို့ ပါဝင်
သော ဓါတုပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားခြင်းသည် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဟု နယ်မြေခံ ရဲအရာရှိများ က ယူဆနေကြသည်။
“သိုလှောင်ထားတဲ့ တချို့ဟာတွေက ရေပတ်ရင်တောင် ဓါတ်ပြုပြီးတော့ ဝုန်းကနဲ ထလောင်တာတွေ ရှိတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ကတော့ အဲလို ယူဆထားတာပဲ။ ဓါတုတွေထားတဲ့ ဂိုဒေါင်ကတော့ တခုပဲဗျ။ သူက ပေါက်ကွဲမှုက များတဲ့အခါကျတော့ ဘေးက ဂိုဒေါင်တွေ၊ အိမ်တွေကို ထိသွားတဲ့သဘောပါ” ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာကို သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ရဲအရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာများမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် ဓာတုပစ္စည်းလောင်ကျွမ်းမှုမှ အကြွင်းအကျန်များကို လူအများ အား ထိခိုက်စေမည့် အန္တရာယ်ပေးနိုင်မှု ရှိမရှိ ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
အစိုးရအနေနှင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ဓါတုပစ္စည်းများကို လူနေထူထပ်သည့် မြို့တွင်းနေရာများ၌ သိုလှောင်ခြင်းကို လူအများက ပြစ်တင်ပြောဆိုနေကြသလို ပေါက်ကွဲမှုများကို ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရန် စံနစ်တကျ
လေ့ကျင့်ပေးထားခြင်းမရှိဟုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်ဦးစီးဌာနကိုလည်း အလားတူပြောဆိုမှုများ ရှိနေသည်။
ပေါက်ကွဲမှုကတဆင့် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ နေအိမ်များသို့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့သဖြင့် အိမ်ထောင်စု
ပေါင်း ၁၄ဝ ကျော်မှ လူဦးရေ ၁ ထောင်ခန့်မှာ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ကာ မီးဘေးဒုက္ခအဖြစ်နှင့် အမှတ် ၂ဝ၊ ၂၄ မူလတန်း
ကျောင်းများနှင့် တာမွေမြို့နယ် ပုသိမ်ညွှန့်ရပ်ကွက်ရှိ မဟာဝိဇယရာမ ကျောင်းတိုက်တို့တွင် ခိုလှုံနေကြကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ယူနေသည့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ဒုရဲမှုး ဦးမျိုးမြင့်ကြိုင်က ပြောသည်။
မီးဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ သောက်ရေနှင့် ဆေးများ ကူညီရန်အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးသမီးအဖွဲ့များအပါအဝင်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတို့နှင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက သွားရောက် ကူညီပေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြ သည်။
အရည်အသွေးနဲ့ တင်ပြချက်ကအဓိကလား...ပြည်သူတွေအရင်မကြည့်ရဖို့ ကအဓိကလား။
အခန့် မသင့်ရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်တောင်အပိတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ၁၀၀ရာနုန်းပြည့်ဒီမိုကရေစီလမ်းမှန်ပေါ်မရောက်
အန်အယ်ဒီဝင်လိုသူများဘွဲ့ ရရမည်လို့ စည်းကမ်းထုတ်ရမလိုလိုပါ။
ပိဿလေးနဲ့ ဘေးပစ်ခံသလိုသလိုနိုင်ငံရေးတင်မကပန်းပါသေသွားနိုင်ပါတယ်။ :D
အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်' ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း အသနားခံစာတင်
မျိုးသန့် | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၈ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ 'လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ'ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ထားသော 'အဲ့ဒီအခန်း
ဖြတ်' ရုပ်ရှင်ကားတိုသည် ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းနှင့် မညီ ဟုဆိုကာ ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းကြောင့် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုရွေးချယ်ရေး ကော်မတီသို့ အသနားခံစာ တင်ပြထားသည်ဟု ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ပြောသည်။
"ကျနော် မနေ့က သိရတာက ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းကမ်းနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့တော့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ကျနော်က မသိပါဘူး။ ဒီ အင်တာနက်ပေါ်တင်ဖို့ကိုလည်း ကျနော် အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။ ဒါလေးကိုတော့ ကျနော် အသနားခံစာအနေနဲ့ ပြန်တင်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်" ဟု အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုအား ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာဝိုင်းက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ဒါရိုက်တာ ကိုသူရ (ဇာဂနာ)၊ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ ဦးစီးသည့် လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် အတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပေါင်း ၁၈၈ ကား ရှိပြီး အဆိုပါကာများထဲမှ "အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်" သည် အင်တာနက်ပေါ် ရောက်ရှိကာ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းနှင့် မညီညွတ်သည့်အတွက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိတော့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မျိုး ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် သူ ရိုက်ကူး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် "အင်းသီး" ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်း အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်မှ ဖြုတ်ပေးခဲ့ရ သည်ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"ကျနော် ကြုံခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။ ကျနော့် "အင်းသီး"ကို ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုကို ကျနော် ပို့တာပေါ့။ စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်း တယောက်ကလည်း အဲဒါကို Youtube မှာ အဲဒါကို တင်ထားတယ်ဗျ။ အဲဒါကို သူတို့သိတော့ ကျနော့်ကို အဲဒါကို
ဖြုတ်ပေးဖို့ သူတို့ လှမ်းပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော် ဖြုတ်ပေးရတယ်" ဟုပြောသည်။
"အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်" နှင့်ပတ်သက်၍ ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းကမ်းကို ဖေါက်ဖျက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်မှာ မှန်ကန်ပြီး ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မတီဝင်များကို မဝေဖန်လိုကြောင်းနှင့် မိမိတွင် အပြစ်ရှိကြောင်းလည်း ဒါရိုက်တာဝိုင်းက
"ကျနော့်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမေစုအပေါ်မှာ၊ ကိုသူရအပေါ်မှာ၊ ကိုမင်းထင်အပေါ်မှာ ပရိသတ်
တွေက ထင်ကြေးတွေ မပေးကြပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေက အများ
ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတာ ကျနော်တို့က နားလည်ရမယ်လေ။ ကျနော် စည်းကမ်းဖေါက်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်မှာ အပြစ်ရှိတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ကို တင်ပြထားတယ်။ တကယ့်တကယ်တော့ သူတို့မှန်ပါတယ်" ဟု ဝိုင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပြိုင်ပွဲမှ ပယ်ချခံရသည့် ၁၈ မိနစ်ကြာမြင့်သော "အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်" ရုပ်ရှင်ကားသည် ပြန်ကြားရေး၊
ပြည်ထဲရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သာသနာရေးစသည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့မှ ယင်းတို့ ကိုယ်စားပြုသည့် ဝန်ကြီးဌာနကို ထိခိုက်စေမည့် ပြကွက်များ စိစစ်ဖြတ်တောက် ပုံကို သရုပ်ဖေါ် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၁၈၈ ကား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဆန်ကာတင် ၅၃ ကား ရွေးချယ်ထားသည်။ အဆိုပါ ဆန်တကာတင်ကားများကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ပြည်လမ်းရှိ တော်ဝင်စင်တာတွင်ကျင်းပမည့် ရုပ်ရှင် ပွဲတော်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကာ ဆုရကား လေးကားကိုလည်း ရွေးချယ်မည်ဟု သိရသည်။
ဆုပေးပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက် ဆုပေးမည်
ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်ကားများ ပေးပို့ထားသည့် ဒါရိုက်တာများအားလုံးကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် တော်ဝင် စင်တာသို့ ညနေ ၄ နာရီအရောက် လာကြရန် ဖိတ်ကြားထားသည်ဟုလည်း ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက
အစက်ကလေး ချ ပါရစေ. . .
ပြိုင်ပွဲဆိုမှတော့ ပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့သူတွေက သူတို့စိတ်ကြိုက်စည်းမျည်း၊ စည်းကမ်းတွေကို ထုတ်မှာ
ဓမ္မတာပါပဲ။ အဲဒီပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရမှဖြစ်မယ် ၀င်ကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီစည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေ
လွတ်လပ်ခြင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် မှာ ပြိုင်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ တချို့ပရိတ်သတ်တွေက ကျနော့်ကို စာ
တွေရေးပြီး မေးမြန်းကြပါတယ်။ “ဆရာချို ၀င်မပြိုင်ဘူးလား” တဲ့။
ကျနော်က “ကျနော်ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်လေ့မရှိပါဘူး ခင်ဗျာ” လို့ပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျနော့်ယုံကြည်မှု ကို အထူးတလည်ဘာမှမပြောချင်၊ မရေးချင်ပါဘူး။ ကျနော့်ဇာတ်ကားတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်သာဆိုရင် ကျနော်ဘယ်လိုအနုပညာသမား၊ ဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာ နားလည် လက်ခံပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ကို ယုံတဲ့ကျနော်ဟာ “အနုပညာ ဆိုတာ ပြိုင်စရာမဟုတ်” လို့လက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒါ ကျနော့်တကိုယ်ရည် ယုံကြည်မှုပါ။ ဘယ်သူ့
ကို မှလည်း မတိုက်ခိုက်လို၊ ကျနော့်လို မယုံကြည်သူများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲစေ့ချင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်း ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ သူတွေဟာ ကျနော်နဲ့ မတည့်တဲ့သူ၊ ရန်သူ၊ ပြိုင်ဘက်
တယောက်မှလည်း မပါတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင်စရာလည်းမလို၊ တိုက်ခိုက်စရာလည်းမလိုပါဘူး။
ကိုသူရဆိုတာလည်း ကိုယ်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ အနုပညာနောင်တော်တဦးဖြစ်သလို၊ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီးဆိုတာ ကျနော်နဲ့ညီအကိုလိုရင်းချာတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းပါ။
၀ိုင်း ရဲ့ ကားလေး ပြိုင်ပွဲကနေပယ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီညီအကိုလိုချစ်တဲ့ အနုပညာရောင်းရင်းတွေလုပ်တဲ့ပွဲမှာ ညီအကိုလိုချစ်တဲ့ ညီငယ်ဝိုင်းအတွက်ရော၊ တခြားမျိုးဆက်သစ်ညီငယ်တွေ၊
ကျနော့်အမြင်ကလေးတခုကို ပို့စ်လေးတခုအနေနဲ့ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေထဲက ဘယ်သူနဲ့မှလည်း ကျနော်ရန်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
တဆိတ်ကလေးရှိ ကိုယ့်အမြင်လေးနဲ့မတူရင် ရန်တွေဖြစ်ကြတာ . . .ငြီးငွေ့စရာကောင်းလှပါပြီ။
“အနုပညာ ပြိုင်စရာမဟုတ်ပါဘူး” ကိုယ့်ခံစားရသလို ကိုယ့်ဖါသာလွတ်လပ်စွာဖန်တီးပြီး ကိုယ့်ဖါ
သာပြလို့ရပါတယ်. .လို့.. ဆိုတာပါ။
၀ိုင်း ရဲ့ကားလေးက အင်တာနက်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားတော့ ပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ရတယ်၊ အားလုံးလည်းနှစ်ချိုက်ကြတယ်။
၀ိုင်းက ကျနော့်ညီငယ်လိုဆိုတော့ သူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါတယ်။
အနုပညာဆိုတာလေ. .မင်းရိုးသားစွာခံစားဖန်တီးတင်ပြမှုကို ပရိတ်သတ်တွေက အသိအမှတ်ပြု
ပြီး ဆုတွေပေးလိမ့်မယ်။ ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ဆု ကို မင်းရပြီးသားပါလို့။
“ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ ဆု” ဆိုတာလေ..
ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့သူကတော့ ကွယ်လွန်သူ ဂီတလုလင်ဘဘဦးကိုကို ပါ။
“မှုန်ရွှေရည်” ကားမှာ နောက်ခံဂီတ ကောင်းလွန်းပေမယ့်၊
အဲဒီခေတ်အခါက တေးဂီတအကယ်ဒမီဆိုတာမရှိသေးတော့ မရခဲ့ဘူး။
ဒီတော့ ဒီဘက်ခေတ် အကယ်ဒမီရတဲ့အခါ ဘဘဦးကိုကို က ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ ဆု ကို ကျနော် မှုန်ရွှေရည် ကတည်းက ရခဲ့ပြီးသားပါ လို့ စင်ပေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာသမားတွေဟာ ပြည်သူအတွက် ရဲရဲရင့်ရင့် လွတ်လပ်စွာဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ပေးတဲ့ ဆု ကို ရကြစမြဲပါ။
ဒီဘက်ခေတ် မျိုးဆက်သစ်အနုပညာသမားလူငယ်လေးတချို့ဟာ ပြိုင်ပွဲရှိမှ ဖန်တီးကြသလို၊ ပြိုင်ပွဲတွေ၊ ဆုတံဆိပ်တွေနောက်ပဲ ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေကြသလို တချို့ရေလိုက်လွဲနေကြတာတွေ့လို့ “လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ စိတ်ဓါတ်” ကလေးကိုလည်း
ဖြန့်ဝေတဲ့အနေနဲ့ “ချီလေတဲ့ချီလေ...ညီလေးရေ” လို့ ပို့စ်ကလေးတခု ရေးမိပါတယ်။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြိုင်ပွဲဆိုတာတွေ မရှိတော့ရင်တောင်...
ပြည်ပကနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်မရလို့ စိတ်ဓါတ်ကလေးတွေညှိုးနွမ်းကြမယ့် အနုပညာသမားလေးတွေအတွက် လည်း ရည်စူးပါတယ်။
ဟောဒီ လွတ်လပ်သောကောင်းကင် ယူကျုတို့၊ အိုင်ကျုတို့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တို့မှာ လွတ်လပ်စွာဖန်တီးတဲ့ အနုပညာကြယ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထွန်းတောက်ကြစေချင်။
အစဉ်အမြဲ တပွင့်ပြီးတပွင့် သူ့ထက်ငါ အပြိုင်လှစေချင် လို့ရေးပါတယ်။
အနုပညာဆိုတာ ပြိုင်စရာမဟုတ်၊ ပြစရာ လို့ ကျနော်က ယုံကြည်တာလေးကိုလည်း တင်ပြရင်း
အဲဒီ လို ယူကျုတွေ အိုင်ကျုတွေ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွေပေါ်က လွတ်လပ်စွာဖန်တီးကြတဲ့ မြန်မာအနုပညာသမားလေးတွေရဲ့ အနုပညာတွေကိုလည်း
မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီးထဲ ထည့်ပေးကြစေ့ချင် ကြောင်းပါ။
ကျနော်ကတော့ စည်းကမ်းတွေမလိုက်နာနိုင်တဲ့အတွက် မပါပါရစေနဲ့ခင်ဗျာ၊ ကျနော့်စည်းကမ်း
လေးနဲ့ပဲ ကျနော်နေပါရစေ။ ကိုချော(မောင်ချောနွယ်) ရဲ့ ငူငှက်ကလေးတွေ သူ့အလိုလိုကြွေကျတဲ့ ညောင်သီးလေးတွေကို စားပါစေ။ ကျနော်တို့အနုပညာဆိုတာ.. ကျနော်တို့ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားဖို့သက်သက်ပါ။
ပြေးလမ်းပေါ်တက်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ။
အုပ်ချုပ်သူပိုင်းမှာ အရေးကြီးရာထူး တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရာထူး ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေ ကြုံနိုင်
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာနှင့်အနီးဆုံး ဆုံမှတ်သို့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ရောက်ရှိခြင်းနှင့် သောကြာဂြိုဟ်မှာ ကမ္ဘာနှင့် နေအကြားဖြတ်ပြီး နေအ၀န်းအတွင်းအနက် စက်အသွင်ရောက်ရှိသော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်မည်
Wednesday, 28 December 2011 15:43
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းက နေကြတ်မှုဖြစ်ပေါ်စဉ်
နက္ခတ်သိပ္ပံရှုထောင့်အရ လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းတွင် အင်္ဂါ ဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာနှင့်အနီးဆုံးဆုံမှတ် သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့် သောကြာဂြိုဟ် မှာ ကမ္ဘာနှင့်နေအကြားဖြတ်ပြီး နေ အ၀န်းအတွင်း အနက်စက်အသွင် ရောက်ရှိသည့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာရေးရာ နက္ခတ်သိပ္ပံ သင်တန်းကျောင်း မှ သတင်းရရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း အင်္ဂါဂြိုဟ် ကမ္ဘာနှင့်အနီးဆုံးဆုံမှတ်သို့ ရောက် ရှိမှုသည် မတ်လ ၄ ရက်နေ့၌ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံ၏ မွန်းတည့်ကောင်းကင်၌ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကာ ပေါက်ကွဲမှုပိုင်း ဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသတိပြုရန်လိုအပ် သော အင်္ဂါဂြိုဟ်သိဟ်ရာသီအတွင်း ရပ်တည်မှုမှာလည်း ဇွန်လ ၂၁ ရက် နေ့အထိ ရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူ သောကြာဂြိုဟ်သည်ကမ္ဘာ နှင့်နေအကြားဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာနှင့်တစ်တန်းတည်းကျကာ နေ၏အ၀န်းအတွင်း သောကြာဂြိုဟ်အနက်စက်အသွင်သို့ ထူးခြားစွာရောက်ရှိမှုသည်လည်း အဆိုပါ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သောကြာဂြိုဟ်နေ အ၀န်းအတွင်း အနက်စက်အသွင်ဖြင့် ရောက်ရှိမှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက် နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့သို့ရောက် ရှိမှသာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပါက ၂၁၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့သို့ ရောက်ရှိမှသာ ထပ်မံဖြစ် ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းက နေကြတ်မှုဖြစ်ပေါ်သည်ကို ကြည့်ရှုနေစဉ်
“လာမယ့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း အင်္ဂါဂြိုဟ် ကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးဆုံမှတ် ကိုရောက်ရှိမယ့်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာ မှာ ငလျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေ မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းကို သတိပြု ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သိဟ် ရာသီအတွင်း ရပ်တည်မှုကလည်း ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်တာကြောင့် အုပ်ချုပ်သူပိုင်းမှာ အရေးကြီးရာထူး တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရာထူး ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေ ကြုံနိုင်ပါ တယ်။ အဲဒီအပြင်သောကြာဂြိုဟ်က ကမ္ဘာနဲ့နေအကြားဖြတ်ပြီး နေအ၀န်း အတွင်းအနက်စက်အသွင်ရောက်ရှိ မှုကြောင့်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတချို့မှာ ငလျင်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတကာရေးရာ နက္ခတ်သိပ္ပံ သင်တန်းကျောင်းမှ ဦးဇေယျာကိုက ရှင်းပြသည်။
မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ် မည့်အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာနှင့်အနီး ဆုံးဆုံမှတ်သို့ရောက်ရှိမှုကို မြန်မာ နိုင်ငံ၏ မိုးကောင်းကင်တွင်လေ့လာ ခွင့်ရရှိနိုင်ပြီး ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်မည့် သောကြာဂြိုဟ်သည် ကမ္ဘာနှင့်နေအကြားဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာနှင့် တစ်တန်းတည်းကျကာ နေ၏အ၀န်း အတွင်း အနက်စက်အသွင်သို့ ထူးခြားစွာ ရောက်ရှိသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုမူ ဖလင်ကော်ပြားခံပြီး ကြည့်ရှုမှသာနေ၏ အ၀န်းထဲတွင် သောကြာဂြိုဟ်ကို အနက် စက်အသွင်ဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့်သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈၁ ဦး
၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ယမ်းစိမ်း၊ ကန့် စသောပစ္စည်းများအား ကူးစက်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ပြောကြား သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈၁ ဦးရှိကြောင်းသိရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ် ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာမွန်ဝင်း၊ မေတ္တာမွန်ဂိုဒေါင်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ အချိန်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုမှာ ၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ယမ်းစိမ်း၊ ကန့်စသော ပစ္စည်းများအား ကူးစက်ကာ ပေါက်ကွဲမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာမွေမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဂိုဒေါင်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ကြောင်းကို နံနက် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် ဖုန်းဖြင့်သတင်းပေးပို့ ခဲ့သဖြင့် မီးသတ်ယာဉ် ၅၇ စီး၊ အထောက်အကူပြုယာဉ် ၁၃ စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် ၁၀ စီး၊ သန္ဓေတပ် ဖွဲ့ဝင် ၅၄၆ ဦး၊ အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၈၂ ဦး၊ တိုင်းကြက်ခြေနီ ၁၃၀ ဦးတို့ဖြင့် သွားရောက်မီးငြှိမ်း သတ် ခဲ့ရာ နံနက် ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ် အချိန်တွင် မီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီး နံနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယခုမီးလောင်ကျွမ်းသော ဂိုဒေါင်မှာ အစိုးရဌာနပိုင်းအား ပုဂ္ဂလိက ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သော ဂိုဒေါင်ဖြစ်ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် ဂိုဒေါင် ၁၆ လုံးခန့် မီးလောင်ခံရပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအား စုံစမ်းတွက်ချက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ မီးလောင်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးအပါအ၀င် အရပ်သား ၁၂ စုစုပေါင်း ၁၇ ဦးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအနေဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၃ ဦးအပါအ၀င် အရပ်သားစုစုပေါင်း ၈၁ ဦး(သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈ ဦး)ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီကျော် အချိန်ခန့်တွင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
မီးလောင်မှုကြောင် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တင်ပို့ကုသလျက်ရှိပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် မီးဘေးဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၉၉၆ ဦးအား မဟာဝိဇယ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အ.မ.က (၂၀) နှင့် အ.မ.က (၂၄) ကျောင်များတွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးထားကြောင်း သိရှိရသည်။
၃၀-၁၂-၂၀၁၁ မနက်ဖြန် ဒီနေရာမှာ ညီညွတ်ခြင်း ကို ပြကြ...
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန...
အုပ်ချုပ်သူပိုင်းမှာ အရေးကြီးရာထူး တာဝန်တွေ ထမ်းဆေ...
၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့်သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ...